Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » रवी लामिछानेलाई ऋषि धमलाको सन्देश- “म पनि ५७ दिन हिरासत बसेको छु! राम्रो काम गर्नेमाथि षड्यन्त्र भईरहन्छ” !
रवी लामिछानेलाई ऋषि धमलाको सन्देश- “म पनि ५७ दिन हिरासत बसेको छु! राम्रो काम गर्नेमाथि षड्यन्त्र भईरहन्छ” !
काठमाडौं । पक्राउ परेका पत्रकार रवी लामिछानेको विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।एक संचारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जो पत्रकारसँग धेरै अपेक्षा हुन्छ उनै पत्रकार धेरै वि*वादमा आउने भन्दै पत्रकारले जस्तो सुकै क*ठिन परिस्थितीमा पनि संयमित भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रिपोर्टस क्लब नेपालमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म पनि ५७ दिन हि*रासतमा बसेको छु नि । तर मूल कुरा भनेको अ*नुसन्धान लागि निष्पक्ष हुनुपर्छ । र चु*नौतीको सामना गर्नुपर्छ ।”
व्यवस्था फेरिएपनि नेपाली पत्रकारिता चु*नौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । समग्र पत्रकारिताको कुरा गर्दा सु*रक्षित छ भनेर भन्न नसकिने भन्दै उहाँले सबैको लागि अ*नुकरणिय उदाहरणिय काम गर्नेमाथि आक्षेपहरू आइरहने बताउनुभयो । रवी पक्राउ पर्नु प्रहरीको अनुसन्धानको विषय रहेकोले सहि किसीमले अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अनुसन्धानबाट साँचो कुरा आओस् भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “अनुसन्धान निष्पक्ष होओस् । कसैलाई अन्याय नहोस् । नेपालको अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ । म समग्र रुपमा नेपालको पत्रकारिताको विकास चाहन्छु ।”
यो हामी सबैको परिक्षा हो अब रवि लामिछानेप्रति षड्यन्त्र भइरहेको छ । उहाँको न्यायका लागि चितवन जिल्ला अदालत जाऊँ भन्दै अपिल गरेका छन् ।